laptop tutorial videos by TzH ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Knowledge and FAQ , laptop ၀ယ်ယူရာတွင် သိရမည့် အချက်များ , ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ » laptop tutorial videos by TzH
By သန့်ဇင်ဌေး7:23 PM17 comments
sainge March 29, 2012 at 8:02 PM
ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ ပါဘူးဗျာ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို နေမင်းမောင်...
pandablogger March 29, 2012 at 10:56 PM
ကိုနေမင်းမောင် ရဲ့ ဘလော့ ကြော်ငြာလေးကို တွေ့တော့ တော်တော်အံသြသွားတယ် ... သူငယ်ချင်းတွေလား ......
nn March 30, 2012 at 2:27 AM
သန့်ဇင်ဌေး March 30, 2012 at 2:28 AM
saizaw March 30, 2012 at 12:57 PM
ကျေးဇူးနော် ကိုနေမင်းမောင် . . .
အကုန်ယူလိုက်ပြီ . . . .
Anonymous March 31, 2012 at 6:39 PM
ကျေးဇူးပဲနော်...ဒါပေမယ့် အပိုင်း၁ က မေ့သွားတာလားရှင့်...မတွေ့လို့မေးကြည့်တာပါရှင့်..
part 1 is missing. pls upload for us bro when you have time.
မောင်အေးလွင်(မာန်အောင်) April 5, 2012 at 10:18 AM
Rain Maker April 9, 2012 at 1:59 AM
အစ်ကိုရေ့ ကျနော်လည်း သူများပြောသလို့ပေါ့ဗျာ ကျေဇူးတင်ပါတယ် ။ မြန်မာလို ကွန်ပြူတာသင်ကြားရေး Vedio file တွေတင်ပေးပါလားဗျာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အမှန်ပြောတာပါ မဝယ်နိုင်လို့ပါဗျ အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ အဆင်သ်ိပ်မပြောဘူး အစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။ လေ့လာနေသူမို့ ကူညီပေးပါနော်။
mmyat72 May 30, 2012 at 8:38 PM
ထူးလင်းအောင် July 14, 2012 at 10:53 PM
အကိုရေ ညီကိုတစ်ခုလောက်ပြောပြပါ ညီ လက်တော့အထဲမှာရှိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကုိ ဖျက်တဲ့အခါမှာ တခါထဲပျက်မသွားဘူး အခုဖျက်လိုက်ရင် နောက်နေ့ဆိုရင် အဲ့ဆော့ဝဲတွေက စက်ထဲကိုပြန်ရောက်နေတတ်တယ် အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ပြီတော့ ညီ မြန်မာစာလေကျင့်တဲ့လက်ကွက်ကိုလဲ လိုချင်ပါတယ် ဘယ်နေရာမှာရနိုင်မလဲဆိုတာလေကိုကျေးဇူးပြုပြီတော့ပြောပြပေးပါနော် အကို
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင် ညီလေး ထူးလင်းအောင်
ထူးလင်းအောင် July 14, 2012 at 10:54 PM
Zawmin Latt June 6, 2013 at 3:05 AM